Miasa Ho An’ny Wi-Fi an-Tanàndehibe Voalohany Ao Shily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2017 3:10 GMT
Tanàndehibe misy mponina manodidina ny 25.000 i Salamanca (ES) . Ao amin'ny faritra fahefatra, Coquimbo no misy azy . Antsoina hoe “Salamanca : monisipalite voalohany amin'ny Taonjato faha XXI ” ny tetikasa. Araka ny fanazavan'i Atina Chile (ES), ahitana ny fandraisana anjaran'ny monisipaliten'i Salmanca (ES) , ny orina Mpanasoa Pelambres Copper , D-link ity tetikasa ity, ary nokarakarain'ny Orina Mpanasoa Mercator (ES) . Nanomboka tamin'ny volana Mey izany ary araka ny tranonkala, hifantoka amin'ny:
Wi-Fi maimaim-poana ho an'ny monisipalite iray manontolo
Fampianarana mamaky teny sy manoratra nomerika faobe ho an'ny vondrom-piarahamonina
Tolotra fidirana amin'ny fotodrafitrasa ara-teknolojia amin'ny vidiny mirary
Fananganana Monisipalite nomerika
Fampiroboroboana fandraisana anjara amin'ny fampahalalam-baovao nomerika
Fanentanana bilaogy 1 isaky ny olom-pirenena
Mpilatsaka an-tsitrapo antserasera manerana ny firenena mba hampianatra mamaky teny sy manoratra ny vondrom-piarahamonina
Nanoratra i Paula Rojo (ES), avy amin'ny Orina Mpanasoa Mercator hoe:
Fantatr'ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 60 fa hijery ireo sary ny ankizy sy ny olom-pirenena zokiolona rehefa mifandray ao amin'ny kianja be ao Salamanca izy ireo; ireo mpianatra miisa 300 ao amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra nomerika; hanoratra ao amin'ny bilaogy iray ireo mpianatra miisa 200, ary ny manampahefana rehetra miasa ho an'ny fanovana ny tanàndehibe dia porofo manamarina fa azo atao ny mampihena hantsana izay tsy azon'ny taratasy esorina.